Kitra faritra Boeny : nailiky ny Fosa Junior, 5 no ho 0, ny FCO | NewsMada
Kitra faritra Boeny : nailiky ny Fosa Junior, 5 no ho 0, ny FCO
Niatrika lalao voalohany eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny ligim-paritra ny any Boeny ny faran’ny herinandro teo. Hanomboka ny azy koa ny eto anivon’ny ligin’Analamanga. Nomena tombony ny Elgeco Plus.
Mazava ny fandresen’ny Fosa Junior 5 no ho 0 be izao ny Fortior de la Cote Ouest tamin’ny fihaonan’ny roa tonta tao amin’ny kianja Rabemananjara, tamin’ny lalao tafiditra amin’ny andro voalohany. Nampiditra ireo baolina dimy ireo i Elefonie sy i Mario teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, raha i Sambatra sy i Dax ary i Santatra kosa ny nampiditra ireo baolina telo hafa teo amin’ny fidirana faharoa.
Tsiahivina fa anisan’ireo ekipa anisan’ny misongadina sy andrarezina eo amin’ny fifaninanam-pirenena eto amintsika ny Fosa Junior. Tafiditra laharana fahefatra izy ireo, miaraka amin’ny Cnaps Sport, ny Elgeco Plus ary ny Zanakala FC teo amin’ny “Poule des As” , niadiana ny tompondakan’i Madagasikara tamin’ny taon-dasa.
Teo amin’ny fiadiana ny amboara kosa, lavo teo amin’ny manasa-dalana izy ireo. Na izany aza, mety hitondra aina vao ho an’ity, ekipan’i Boeny ity, ny nanatevenana ireo mpilalao ka nandraisana an’Andriamahery Chretien sy Rajaoniasy Florent hilalao eo anivon’ny Fosa Junior amin’izao taom-pilalaovana izao.
Tsy handray anjara ny Elgeco Plus
Ho an’ny eto Analamanga kosa, hanomboka ny zoma 3 febroary izao avy hatrany eny amin’ny kianjan’i Bevalala ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompon-daka, diviziona voalohany. Tsy handray anjara amin’izany dingana izany ny Elgeco Plus noho izy ireo mbola hiatrika ny lalao afrikanina tafiditra amin’ny savaranonando, hiadiana ny amboaran’ny Caf.
Fandaharan-dalao ho an’ny maraina, ny MI 20 hifampitady amin’ny COSPN ary ny FC Tana hifanandrina amin’ny AS Adema. Ny tolakandro kosa, hihaona ny Sab Nam sy ny Tana Formation ary ny Mama FC hikatroka amin’ny Uscaf.